Haweeney Sacuudi ah oo nin guursan lahaa loogu diiday inuu garaaco gitaar… – Hagaag.com
Haweeney Sacuudi ah oo nin guursan lahaa loogu diiday inuu garaaco gitaar…
Posted on 2 Oktoobar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Haweeney Sacuudi ah ayaa ku guul dareysatay dagaal sharci ah oo ku saabsan guur nin ay dooratay, sababta ayaa maxkamada ku sheegtay in ay u aragto in uusan munaasib ku aheyn guurkeeda dhinaca diinta awgeed, waayo wuxuu garaacaa cuudka ama gitaarka, sida ay sheegtay warbaahinta Sacuudiga.
Dumarka Sacuudi Carabiya ayaan guursan karin, safri karin iwm ilaa ogolaanshaha wali amarkeeda.
Labo sano ka hor, nin shaqadiisu ay tahay macallim ayaa khudbeystay haweenay madax ka ah bangi oo jirta 38 sano deggan magaalada al-Qassim, waqooyiga caasimada Riyadh, sida laga soo weriyey wargeyska Okaz.
Laakiin qoyskeeda ayaan aqbalin khudbada ama siismada waxayna ku sheegeen “inuu diin ahaan aan ku habooneyn” guurka, waayo wuxuu tumaa gitaar.
Haweeneyda, oo aan la sheegin magaceeda ayaa arrinta u gudbisay garsoorka.
Maxkamada ayaa u xukuntay qoyska, iyada oo ku sheegtay in ninkaasi aanu aheyn mid loo guurin karo. Sababta maxkamada u cuskatay ayaa aheyd in uu garaaco Gitaar, sidaa darteedna diin ahaan aan ku habooneyn guurka haweeneyda.
Wargeysku wuxuu intaa ku daray in maxkamada rafcaanka ay ansaxisay go’aanka maxkamadii hore, taasi oo xukunka ka dhigeysa kama dambeys.
Haweenyada ayaa sheegtay in ay ka raadsan doonto ogolaansho madaxda sare ee dalka guurkeeda.
Haweeneyda, oo mas’uul ka ah in ka badan 300 oo shaqaalaha maamulka bangiga ayaa sheegtay in ay ka go’an tahay in ay guursato khadhiibkeeda, waxyna ku tilmaantay inuu yahay mid cabsida Ilaah ku dheer, sumcad fiicanna dadka ku dhex leh.
Sacuudi Carabiya, ayaa billaabday dib-u-habayn aad u weyn sannadkii hore oo loogu talagalay hagaajinta sawirka boqortooyada, oo ay ku jirto in haweenku ay wadaan baabuurta.
Laakiin wali waxaa jira oo lagu naqdiyaa in dumarku ay hoos tagaan ragga.